Iyo yakanakisa yekugadzira software yeGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Zvinokanganisa zvinogona kutambisa nguva yakawanda kubasa, pamabasa ako epamba, kana uchidzidza. Izvi zvinokuita kuti utore nguva kubva kune zvimwe zviitiko, uye pakupedzisira unogumbuka. Nekudaro, parizvino pane kuwanda kwenzira dzeku kunatsiridza zvibereko, pamwe nemaapplication ayo achakubatsira iwe kuita kudaro.
Kana iwe ukavandudza kugona mumabasa ako, Uchaona kuti haungogone kuita zvakawanda nekuita kushoma, asi zvakare uchave nenguva yakawanda yekuzorora uye yekuzorora. Kuti ikubatsire kusangana nechinangwa icho, muLinux une maapps senge ...
1 Zvakanakisa maturusi ekugadzirwa muLinux
Zvakanakisa maturusi ekugadzirwa muLinux
Vamwe ve zvirinani zvigadzirwa zvekushandisa iyo iwe yaunogona kuisa pane yako aunofarira GNU / Linux distro ndeaya:
Iyo software inokutendera iwe zvirinani kushandisa nguva yako. Manage iwo mabatiro aunotsaurira iwo mabasa, manyore kureketa maawa ebasa kuti ugone kuve neruzivo rwezvinoitwa uye kana paine zvimhingamupinyi munzira, pamwe nekuongorora mashandiro emapurojekiti akasiyana.
Haisi chishandiso chekuvandudza kugadzirwa zvakadaro, asi zvinogona kukubatsira kuti uve nazvo maziso asinganete uye anovandudza hutano hwemaziso paunoshandisa nguva yakawanda pamberi pekona. Izvo zvinogona zvakare kukanganisa kuita zvisina kunangana. Nayo, zvinoenderana neyako nguva yenguva nenzvimbo yezuva, unogona kugadzirisa kupenya uye kusefa kwechiedza chebhuruu chinokuvadza.
Icho chinonakidza chigadzirwa chishandiso. Inogona kuve nemamojuru akawanda, senge karenda, bhuku rekero, ku-do runyorwa kuita uye system yezviyeuchidzo, zvinyorwa, nezvimwe. Uye zvakare, zviri nyore kwazvo kushandisa uye kugadzirisa.
Catfish chishandiso chinoshandisa iyo backend tsvaga uye tsvaga, yakakurumbira tsvaga uye tsvaga mirairo, asi iine nyore GUI. Nayo iwe unenge uine mafaera ese aripo ipapo, kuti usatambise imwe nguva kana iwe usingazive pane chimwe chinhu ...
FocusWriter ndeye yakapusa uye inozorodza kunyora app. Iyo inoshandisa yakavanzika interface kuti isvike nekufambisa mbeva kumucheto kwechidzitiro, ichibvumira chirongwa kuve neinozivikanwa chitarisiko. Nenzira iyoyo, zvinokubatsira kunyudza mune rako basa.
LastPass kupinda mapassword kunogona zvakare kunetsa kana uchishandisa yakawanda yemabasa akasiyana. Kuti uvandudze kugadzirwa mupfungwa iyoyo uye usakanganwa mapassword ako (kumanikidza kuitazve), unogona kushandisa iyo password maneja LastPass.
Kana iwe uchida nyora pasi mazano ako chero nguva kana kunyora pasi mabasa aunofanirwa kuita, zvaunofanira kurangarira, nezvimwe. Simplenote chirongwa chiri nyore kutora manotsi panguva ino nenzira iri nyore uye yakapusa. Uye kana uchida, unogona zvakare kushandisa FreeMind, software yekugadzira mepu dzepfungwa uye nekuzvironga nenzira yakanakisa.
Iyo SaaS yekugadzira software, yakavakirwa pamusoro pegore, uye izvo zvinobvumidza nguva yekutevera anoshandirwa muzvirongwa. Uye zvakare, inopa yakachengeteka chikuva kumakambani uye ine Pandora FMS sevimbiso yekubudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iyo yakanakisa yekugadzira software yeGNU / Linux